France Abụrụla Market Inbound Travel Market na Tanzania
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » France Abụrụla Market Inbound Travel Market na Tanzania
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ejiri France ka onye isi na mbata ahịa njem na Tanzania, ebe ọ bụ na nke ikpeazụ a meghere mbara igwe ya maka njem n'etiti ọrịa COVID-19 ụwa.
Tanzania meghere ọdụ ụgbọ elu ya maka ụgbọ elu ndị njem mba ofesi na June 1, 2020, mgbe ọnwa 3 gachara agba nke COVID-19, na-aghọ mba ọsụ ụzọ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa ịnabata ndị njem nleta iji chọpụta ihe nlegharị anya ya.
Nchịkọta akụkọ kachasị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ nchekwa na njem nlegharị anya nke steeti na-egosi na France na-eduga na ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta na Tanzania n'ime ọnwa 3 nke metụtara July, August, na September 2020.
Onye na-ahụ maka nchekwa nchekwa mmanụ na Tanzania (TANAPA) nke na-ahụ maka pọtụfoliyo azụmahịa, Oriakụ Beatrice Kessy, kwuru na ndekọ na-egosi ngụkọta nke ndị njem nlegharị anya 3,062 nke France gara n'ogige ntụrụndụ mba n'oge a na-enyocha, na-ebuli ọkọlọtọ France elu dị ka onye njem nleta kachasị elu mba ụwa. ahịa nke Tanzania n'etiti ọgba aghara ahụ wee chụga ndị USA na ndị njem ezumike 2,327.
Nke atọ n'ime ndepụta nke isi obodo ndị njem nleta na Tanzania bụ Germany na ndị ọbịa 1,317, ndị UK na-esote 1,051 ndị njem nleta nọ n'ọnọdụ nke anọ. Spain, na nke ise, enyela Tanzania ndị njem ezumike 1,050, ndị India na-ejegharị na ndị njem 844 bụ ndị gosipụtara ihe ndị mara mma nke mba ahụ. Switzerland nwere ọnọdụ nke asaa na ndị njem 727, ndị Russia na-esochi ya n'ọnọdụ nke asatọ na ndị ọbịa 669, Netherlands na ndị njem 431 nọ n'ọgba nke itoolu, na nke iri bụ Australia maka iwetara ndị ezumike 367 n'oge oge a na-atụle.
Nke a na-egosi na ọ bụghị naanị na France tụpụrụ ịtụ vootu ntụkwasị obi maka etu Tanzania si eme ihe banyere ọrịa ọrịa COVID-19, kamakwa ọ bụ ezi enyi iji nyere mba ahụ aka ịtụte ụlọ ọrụ ndị njem na-achọ ịkwalite azụmaahịa ndị ọzọ, weghachite ọtụtụ puku ọrụ funahụrụ, na spawn na itinye ego n'ime igbe nchekwa.
“Anyị nwere ekele dị ukwuu n’ebe ndị njem France na-eme njem nleta maka ịtụ vootu nke obi ike na Tanzania dị ka ebe nchekwa. Mbata ha na-ekere òkè dị ukwuu n'ịgbasa ntụkwasị obi n'ọtụtụ ebe, na-erite uru na-agabiga njem nlegharị anya karịa, "Ms, Kessy kọwara.
Nye ọtụtụ ndị, France abụrụla enyi kacha mma Tanzania n'ezie n'ihi na ọ na-akwado nnabata na nhazi oge nke ụlọ ọrụ ndị njem nke ọtụtụ nde obere azụmaahịa na ọrụ na-adabere.
Ihe omume a emebeghị na ndabara, kama ọ bụ na ọ gbasiri mbọ ike nke onye nnọchi anya Tanzania na France, Maazị Samwel Shelukindo duziri.
“Ọfịs m rụrụ ọrụ oge karịa na mmekorita chiri anya na Mount Kilimanjaro Safari Club (MKSC) na Axium nke Parker, yana Tanzania Tourist Board (TTB). Anyị haziri ọtụtụ nzukọ na ndị ọrụ njegharị na ndị mgbasa ozi bụ isi iji mesighachi ha obi ike na Tanzania bụ ebe dị nchebe n'etiti ọrịa ọrịa COVID-19, "Maazị Shelukindo kwuru na mkparịta ụka nkịtị.
Onye ozi ahụ kwuru na atụmatụ ha bụ nke Onye isi ala Dr. John Pombe Magufuli kwalitere na-egbochi imechi mba ahụ na ịnabata ndị njem nleta.
N'ezie, Onye isi ala Magufuli, dị ka onye ibe ya na Sweden, ewepụtabeghị mkpọchi, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ala, ma kpọọ ndị njem ka ha banye mba mgbochi.
“Apụrụ m ịsị n’udo na nke a bụ ihe nzuzo n’azụ ihe ọma ahụ. Enwere m obi ụtọ na Onye isi ala Magufuli n'ihi na o mere ka anyị jiri obi ike na-arụ ọrụ na mba ọzọ. Ekelerekwa m MKSC, Axium nke Parker, na TTB maka mgbasa ozi ha iji kwalite Tanzania dị ka ebe dị nchebe, ”ka o kwuru.
Ebe ọ bụ na Mazi Shelukindo chere na ọfịs na Paris laghachi na 2017, ndị France na-eme njem nleta na Tanzania na-arị elu nke ukwuu.
Ihe ndekọ data gọọmentị na-egosi na na 2016, France nyere ngụkọta nke ndị njem nleta 24,611, na 2017, ọnụ ọgụgụ ahụ metụtara ndị njem 33,925, ebe na 2018, e nwere ndị ọbịa 41,330, na 2019, ndị bịarutere ruru ndị njem nleta 56,297.
Onye guzobere MKSC, Denis Lebouteux kwuru na n'ọtụtụ oge, ndị njem nlegharị anya French na-enubata na Tanzania na obere oge mgbe ogige ntụrụndụ mba na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-agụ agụụ n'ezie imeju ụlọ efu.
"Ya mere, nke a bụ ihe dị iche iche ndị njem France," Maazị Lebouteux kwuru, na-agbakwunye na ha na-eleta mgbe Tanzania kachasị ha mkpa.
N’ịbụ nke udo na ịhụnanya nke mba ahụ, anụ ọhịa ya nwere oke osimiri, osimiri na ọdịbendị nyere ya obi ụtọ, ndị njem French na-eji nwayọ nwayọ ma bụrụ isi nkuku nke ụlọ ọrụ ndị njem na Tanzania.
N’ihe ruru mmadụ 1.5 nde na-abịa njem nleta kwa afọ, njem nlegharị anya nke anụ ọhịa na-aga n’ihu ma na-eme ka ọkwa ya dị ka onye na-ebute ego mba ofesi na Tanzania, na-ewebata mba ahụ ijeri $ 2.5, nke ya na ihe ruru 17.6 pasent nke GDP ya.
Tụkwasị na nke ahụ, njem nleta na-enye ndị Tanzania ọrụ 600,000 kpọmkwem, ma ya fọdụkwa ihe karịrị otu nde ụmụ amaala ndị ọzọ na-akpata ego site na ụlọ ọrụ ahụ.